Daawo:Waddan soo saaray tareen aad uga xawaare dheereya diyaaradaha oo shirkadaha duulimaadka cabsi galiyay | Baahin Media
Daawo:Waddan soo saaray tareen aad uga xawaare dheereya diyaaradaha oo shirkadaha duulimaadka cabsi galiyay
May 31, 2019 - jawaab
Ding Sansan oo ah Ku xigeenka madaxa farsamayaqaannada shirkadda CRRC Sifang ee tareenkan cusub dhisaysa ayaa shir jaraa’id oo uu qabtay ku sheegay, in tareenkani uu tijaabadii u horreysayba ka gudbay. Sidaa awgeed hadda kaddib ay ka shaqaynayaan hawl-gelintiisa.
Isaga oo ka warramaya xawaaraha uu arkayna waxa uu sheegay in caadi ahaan diyaaraduhu ay labadan magaalo u kala socdaan Afar saac iyo badh oo lagu daray waqtiga qofka lagu soo xareeyo garoonka diyaaradaha ee uu garoonka hawlihiisa ka dhammaysanayo ama sugayo.
Halka tareenkan dheereeya ee hore u jirayna uu safarkani ku qaadan jiray qiyaas ah shan saacadood iyo badh. Laakiin tareenka cusub ee hadda uu Shiinuhu sameeyey ayaa labada magaalo u kala socon kara Saddex saacadood iyo badh keliya.
Taas oo macnaheedu yahay in uu ka dheeraynayo diyaaradda. Waxa aanu abuurayaa xiise ah in dad badani ay iskaga safraan tareenka.
Arrintaas oo aanay ku farxi doonin shirkadaha duulimaadyada oo sababaha loogu xisho qiimaha tigidhadooda ee qaaliga ahi ay tahay xawaaraha iyo in ay u safri karaan meelo aanu gaadiidka dhulku ku safri Karin.